IPhone Yangu Haizogadzirise! Heino Chaicho Kugadzirisa. - Iphone
ipad kunetsekana wont batidza
iphone xr inoratidza bhatiri muzana
usauye ku internet mangwana
iphone yebhuruu skrini yekukuvara kwemvura
IPhone Yangu Haizogadzirise! Heino Chaicho Kugadzirisa.
Apple ichangobva kuburitsa itsva iPhone software yekuvandudza uye iwe une shungu yekuedza ese matsva maficha ayo ainosanganisira. Unoenda kunovandudza yako iPhone kune yazvino vhezheni yeIOS neBAM! Yako iPhone haizo gadzirise . Kunyangwe iwe ukaedza kangani, mameseji ekukanganisa anoramba achibuda kana maitiro acho achingodzikira, uye kuri kuita kushatirwa. Usanetseke: Muchinyorwa chino, ndiri kuzokuratidza maitiro ekugadzirisa iyo iPhone isinga gadzirise .
Yangu iPhone Haizovandudze: Dzokera kuBasics
Izvi zvingaite sezviri pachena, asi kazhinji kudzoreredza yako iPhone kunogona kugadzirisa kugadzirisa zvinhu. Kuti uite izvi, bata pasi bhatani rako remagetsi e iPhone kusvikira iyo 'Slide kune Power Off' inotsvedza yaonekwa. Kana yako iPhone isina Bhatani repamba, panguva imwe chete pinda mubatirire bhatani repadivi uye chero bhatani revhoriyamu.
bhaibheri bhaibheri nezve moyo wakaputsika
Sveta chinotsvedza kubva kuruboshwe uchienda kurudyi nemunwe wako, mirira mashoma masekondi kuti iPhone yako idzime, uye nekukurumidza dzoreredza nekubatisisa pasi bhatani remagetsi.
Ita shuwa Iwe Une Yakwana Yemahara Nzvimbo
Tevere, tarisa kana yako iPhone iine nzvimbo yakakwana yekuchengetedza iyo yekuvandudza. IOS inogadziridza kazhinji inoda 750-800 megabytes enzvimbo yemahara vasati vaiswe. (Kune 1000 megabyte mu1 gigabyte, saka haisi nzvimbo yakawanda.)
Kuti utarise kuti yakawanda sei nzvimbo iripo, ita zvinotevera:
Vhura Zvirongwa pane yako iPhone.
Tinya iyo general .
Mupumburu pasi uye vawane iPhone Kuchengeta .
Pamusoro pechidzitiro, uchaona kuwanda kwekuchengetedza kunowanikwa pane yako iPhone. Kana uine zvinopfuura 1 GB (gigabyte) iripo, saka une nzvimbo yekuchengetedza yakakwana yekugadzirisa yako iPhone.
Kana iTunes Isingashande, Edza Iyo Zvirongwa App (uye Vice-Versa)
Pane nzira mbiri dzekuvandudza chishandiso cheIOS: kushandisa iTunes kana mukati meMapurogiramu app. Kana iwe ukaona uri kuwana zvikanganiso kana uchishandisa iTunes kugadzirisa yako iPhone, ipa iyo Zvirongwa app kupfura. Kana iyo App yezvirongwa ikasashanda, edza kushandisa iTunes. Ini ndinokuratidza maitiro ekuita zvese zviri zviviri. Ini ndinokurudzira zvikuru kutsigira yako iPhone kune iTunes kana iCloud usati watanga iyo yekuvandudza maitiro.
Kugadziridza Yako iPhone Mune iTunes
Vhura iTunes pakombuta yako uye plug mune yako iPhone uchishandisa yako Mheni tambo (iyo tambo yaunoshandisa kuchaja yako iPhone).
Dzvanya iyo iPhone bhatani pamusoro peiyo iTunes hwindo.
Dzvanya iyo Kwidziridza bhatani kurudyi-ruoko rekona.
Simbisa kuti iwe unoda kugadzirisa yako iPhone nekutepa Dhawunirodha uye Gadziridza.
Kugadziridza Yako iPhone Mukutsvaga
Kana Mac yako ichimhanya macOS Catalina 10.15 kana nyowani, iwe unoshandisa Tsvaga panzvimbo yeTunes kana uchigadzirisa yako iPhone.
Unganidza yako iPhone kune Mac yako uchishandisa Mheni tambo.
Dzvanya pane yako iPhone pasi Nzvimbo .
Dzvanya Tarisa uone Kuvandudza .
Kugadziridza Yako iPhone Mune Zvirongwa
Vhura iyo Zvirongwa app pane yako iPhone uye tap general .
Tinya Software Kwidziridzo.
Chivharira muna iPhone wako uye vawane mashoko Dhawunirodha uye Isa bhatani.
MaApple Servers Akaremerwa Here?
Kana Apple ikaburitsa itsva iOS yekuvandudza, mamirioni avanhu ari kubatanidza maPhones avo kune maSeva eApple kurodha pasi nekumisikidza. Nevanhu vese ivavo vanobatana panguva imwe chete, Apple server inogona kunetseka kuti ichengete, izvo zvinogona kuve chikonzero nei yako iPhone isinga gadzirise.
Isu takaona dambudziko iri neApple ichangoburwa kuvandudzwa kukuru: iOS 13. Zviuru zvevanhu zvakave nenguva yakaoma kuisa iyo yekuvandudza uye vakatikumbira rubatsiro!
Nekudaro, kana iwe uri kuyedza kuita hombe kuvandudza pane yako iPhone, gara uchifunga kuti mijenya yevamwe vanhu vari zvakare, saka dzimwe nguva iwe unongofanirwa kunge uine zvishoma murwere! Kushanya Webhusaiti yeApple kuona kana maseva avo ari kushanda nemazvo.
Yangu iPhone Zvakadaro Hazvigadzirise!
Kana yako iPhone ichiri isinga gadzirise, inguva yekudzorera yako iPhone mu iTunes. Ita shuwa kuti foni yako yakatsigirwa isati yadzoreredza, nekuti unenge uchidzima zvese zvirimo uye marongero kubva ku iPhone yako.
Kudzorera Yako iPhone
Vhura iTunes pakombuta yako uye plug mune yako iPhone uchishandisa yako Mheni tambo.
Dzvanya iyo Dzosa bhatani parutivi rwerudyi rwehwindo.
Simbisa iwe unoda kudzorera chako chishandiso mu-pop-up hwindo. iTunes ichaburitsa yazvino vhezheni yeIOS, bvisa zvese kubva kune yako iPhone, uye isa yakadzokororwa vhezheni yeIOS.
Batsira! Kudzoreredza Hakuna Kushanda!
Kana iwe uchiri kuona zvikanganiso mu iTunes, tevera dzidziso yedu maitiro ekuita DFU kudzorera iPhone wako . Izvi zvakasiyana neyechinyakare kudzoreredza nekuti inopukuta ese software uye Hardware marongero kubva kufoni yako. Inowanzoonekwa sedanho rekupedzisira kugadzirisa software pane yakanamatira iPhone. Kana iyo DFU kudzorera isingashande, panogona kunge paine dambudziko rehardware ne iPhone yako.
sei YouTube isiri kushanda pa iphone yangu
Yako iPhone: Yakagadziridzwa
Uye ipapo unayo: yako iPhone iri kupedzisira kugadzirisa zvakare! Ndinovimba chinyorwa ichi chakubatsira kubuda. Tizivise kuti ndeapi mhinduro akushandira iwe muchikamu chemashoko pazasi.